Vorona ao amin'ny ala tropikaly Amazon. Fitsangatsanganana tanteraka
Vorona any amin'ny ala tropikaly Amazon
Daniel | | Kolombia
Nandritra ny am-polony taona maro, ireo ornithologists sy tia natiora avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nitety an'i Amerika atsimo mba hijery ny harena sy ny lokon'ny karazam-borona maro ao amin'ny ala tropikaly Amazon.
Tsy fampiofanana maimaimpoana io: hatramin'ny taona 1970, ny ornithologist soisa-amerikana Rodolphe Meyer avy any Schauensee nanome toky tamin'ny asany "Torolàlana ho an'ny vorona any Amerika atsimo" (Torolàlana ho an'ny vorona any Amerika atsimo) fa tsy nisy faritra teto amin'izao tontolo izao misy karazam-borona marobe toa an'i Amazon.
Ary na izany aza, ny fanaovana katalaogy feno an'ny vorona rehetra monina amin'ity faritra ity dia asa sarotra. Tombanana ho any amin'ny faritra iray manontolo (izay misy ny ankamaroan'i Brezila, Venezoela, Kolombia, Peroa ary fanjakana hafa), ny isany dia manodidina ny 1.300 karazana. Amin'ireo, manodidina ny antsasaky ny tsy fahita hatraiza hatraiza.
Mba hahatratrarana izany, ny statistika momba ny isan'ny vorona ao amin'ny ala tropikaly Amazon tantanan'ny fikambanana samihafa dia nalaina ho fototra. Ny sasany amin'ireo karazana ireo dia tsy hita afa-tsy amin'ny toeram-ponenana isam-paritra sasany, fa ny sasany kosa zaraina mihoatra ny homogen manerana an'i Amazon.
Ity misy santionany amin'ireo vorona manana solontena indrindra ao amin'ny ala tropikaly Amazon:
2 Hummingbirds sy vorona kely
3 Gallinaceae sy mallards
4 Boloky sy makava
5 Vorona mpangalatra vorona
Ny faritra Amazon dia fonenan'ny karazan-tselatra isan-karazany tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao. Ny malaza indrindra dia ny Voromahery harpy (harpy harpyja), izay atahorana ho lany tamingana. Na izany aza, dia mbola hita any Kolombia, Ekoatera, Guyana, Venezoela, Peroa, Suriname, Guyana frantsay, atsimo atsinanan'i Brezila ary avaratr'i Arzantina.
Miaraka amin'ny roa metatra ny elatry ny elany, izy io iray amin'ireo voromahery lehibe indrindra eto an-tany. Ny volony fotsy, fotsy ary mainty, miaraka amin'ny volony manokana, ny mampiavaka azy lehibe indrindra.
Vorona mpihaza hafa mahazatra an'io faritra io ny alika cryptic (Micrastur mintori) onja vorondolo mahatalanjona (Pulsatix perspicillata).
Hummingbirds sy vorona kely
Ny vondrona vorona lehibe indrindra ao amin'ny ala tropikaly Amazon dia tsy isalasalana fa ireo vorona kely, mihira na tsia. Anisan'ireny ny karazana tena misolo tena azy ireo toy ny hummingbird topaza (topaz pella), miaraka amin'ny rambony lava sy misosa haingana. Ity vorona tsara tarehy ity dia manana volom-boninkazo mamirapiratra ary mampiasa ny vavany tsara hitsentsitra ny vovobony avy amin'ny voninkazo. Niely be nanerana ny faritra izy io.
Mbola misy vorona kely maro hafa any Amazon, katalaogim-be. Raha mitanisa ny iray amin'ireo malaza indrindra dia holazainay ny nuthatch mena (Dendrocolaptes picummus), izay karazan-kazo. Filazana manokana ho an'ny vorona salantsalany, fa tena exotic ary malaza: ny touchan (Nikitika i Ramphastos), tena fantatry ny vavany goavambe.
Gallinaceae sy mallards
Betsaka ny vorona hafa ao amin'ny ala mando any Amazon izay hahagaga antsika. Ireo karazan-tsain'ny fianakavian'i gallinaceae dia manana tongotra matanjaka, vavam-bava fohy ary matetika tsy afaka manidina na mahavita sidina fohy fotsiny amin'ny haavon'ny toerana ambany.
Amin'ity sokajy ity dia miavaka ny camungo (Anhima cornuta), vorona tahaka ny vorontsiloza ka mora fantarina amin'ny fipoahana kely izay mivoaka eo ambonin'ny vavany.
Ao amin'ny faritra misy renirano, lakandrano ary lagoons marobe toa an'i Amazon, lozika ny mahita vorona maro ao amin'ny fianakavian'i ganagana, izany hoe ganagana sy ny toy izany. ny Gisa Orinoco na ny gana voromailala Izy ireo dia karazany roa tena mahazatra, tsy manadino ny peccary, gana gana amin'ny volony maro loko.
Boloky sy makava
Ity karazam-borona ity dia tsy isalasalana fa ny voalohany tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny biby any Amazon isika. Betsaka ny karazana macaw, misy habe samihafa sy toetra mampiavaka azy. ny hyacinth macaw (Anodorhynchus Hyacinthinus), fantatra koa amin'ny hoe macaw manga, angamba no be mpitia indrindra. Izy io dia manana volon'ondry manga velona, ​​misy volom-borona volamena eo amin'ny saokany. Mampalahelo fa karazana tandindomin-doza ity.
Karazana iray hafa tena manaitra ihany koa ny macaw elatra maintso (ara chloroptera), izay hita amin'ny faritra samihafa amin'ny faritra Amazon. Mampiavaka ireo biby ireo ny herin'ny vavany, ny fahalalàny ary ny halavany, satria afaka miaina 60 taona na mihoatra izy ireo.
Vorona mpangalatra vorona
Karazam-borona Carrion, izay mihinana ny sisa tavela amin'ny biby maty hafa. Azonao atao ihany koa ny mahita an'io karazam-borona io any amin'ny ala mando any Amazon. Anisan'ireny, misy iray misongadina ambonin'ireo ambiny: ny voromahery mpanjaka (sarcomphus papa). Tsy biby mahafatifaty manokana izy io noho ireo teboka sy vokatra maniry manimba ny tarehiny.
Na izany aza, tsy maintsy ekena fa, toy ny havany Andes ny CondorIzy io dia manana rivotra aristokraty iray izay manintona indrindra azy. Miankina amin'ny faritra misy an'i Amazon izay onenany, io vorona io dia mahazo anarana samihafa, toy ny condor jungle o mpanjaka zamuro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Vorona any amin'ny ala tropikaly Amazon
Ny cumbia, gadona nentin-drazana any Kolombia
Inona avy ireo orinasa mpamokatra fanafody lehibe any India?